Waxa Covid-19 keena fayrus.Dadka covid-19 qaaday badankoodu waxay u xanuunsadaan sida hargabka oo kale. Dadka qaar ayaa aad u jirada oo daryeel cisbitaal u baahda.
Waxa cudurka covid-19 keena fayras cusub oo ka mid ah kooxda fayruska Korona.
Waxa cudurka laga helay meelo badan oo dunida ka mid ah. Sababtaas darteed ayaana loogu yaqaanaa cudur aafo ah.
Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa meesha aad joogto khuseeya ugu hesho
Waxa jira tallaal covid-19 ah. Waxa uu tallaalku kaa difaacayaa inaad si xun covid-19 ugu jirato.
Waxay dadka badankoodu covid-19 u dareemayaan sida hargab caadi ah ama sida saf/duray.
Qofka u maleynaaya inuu covid-19 qabo ayaa u baahan inuu iska baadho inuu cudurka qabo. Wax dheeraad ah ka akhri bogga Iska qaad tijaabada covid-19.
Kaliya haddii ay wax jiraan uun
Inaad degdeg uga sii xanuunsatey.
Sidee ayaan infegshanka iskaga ilaalin karaa?
Waa in dadka oo dhami iska caawiyaan si aanu covid-19 ugu faafin. Raac talobixinta dawladda.
Guriga joog haddii aad jiran tahay.
Qofka cid kale oo covid-19 qabta la degan ayaa sidoo kale u baahan kara inuu guriga joogo.
Raac talobixinta dawlada xitaa marka lagu tallaalo ka dib.
Waa mid aad u muhiima ah inaad markaad uurka leedahay iska ilaaliso inaad covid-19 u jirato.
Ilmaha ayaa sidoo kale xilli hore soo dhalan kara haddii aad covid-19 qaado inta lagu jiro wajiga/heerka labaad ee uurka.
Iska tallaal covid-19 si aad u dhinto halista aad ugu jiraneyso.
Aad uga taxadir inaad gacmaha dhaqdo
Dadka badankoodu uma baahna in wax daaweyn ah oo covid-19 ku wajahan loo sameeyo. Waxa jira waxyaalo aad adigu sameyn karto si aad uga roonaato.
Dadka qaarkood waxay u baahan yihiin in cisbitaal lagu daaweeyo Qofka cisbitaalka la keenay ayaa tusaale ahaan heli kara oksijiin si uu si ka wanaagsan ugu neefsado.
Dadka qaarkood aad ayey ugu jiradaanoo ay u baadaan in mashiinka neefta ka qaada lagu xidho. Markaas ayaa la suuxin doonaa. Waxaa loo yaqaan daryeelka dadka xaaladoodu khatarta tahay (intensive care).